२०७८ माघ १४ शुक्रबार ०५:५१:००
उच्च अदालतको आदेशमा छुटेपछि पीडितलाई ज्यान मार्ने धम्की
बलात्कार घटनाका अभियुक्त नुवाकोटका ३१ वर्षीय पशुपति मैनाली पाटन उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेपछि पीडितले आफू असुरक्षित बनेको बताएकी छिन् । थुनामा रहँदासमेत विभिन्न नम्बरबाट फोन गरेर निरन्तर धम्क्याएका मैनालीले अहिले मुद्दा फिर्ता नलिए ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेको नुवाकोटकै २६ वर्षीया पीडित युवतीको गुनासो छ ।
बलात्कार गरी त्यसको भिडियो बनाएको र चार वर्षदेखि त्यही भिडियो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गरेर जबर्जस्ती सम्बन्ध राख्दै आएको जाहेरीपछि प्रहरीले मैनालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले १० मंसिरमा जिल्ला अदालतमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले पुर्पक्षका लागि १२ मंसिरमा मैनालीलाई जेल चलान गरेको थियो । यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका मैनालीलाई संयुक्त इजलासले ६ माघमा एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ७ माघबाट उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।
कुन आधारलाई टेकेर फैसला भएको हो त्यो हामी हेर्छौँ : मुना पौडेल, प्रवक्ता, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन
अरू मुद्दाहरूमा पनि हाम्रो कार्यालयमा अदालतले फैसला पठाएपछि निर्णय गरिन्छ । कुन आधारलाई टेकेर अदालतबाट फैसला भएको हो त्यो हामी हेर्छौँ । हामीलाई चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने हो । अन्य मुद्दाझैँ यो पनि कार्यविधिगत रूपमा नै अगाडि बढ्छ ।
पुर्पक्षका लागि जेलमा छँदा पनि आफूलाई फोन गरेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको पीडितको गुनासो छ । ‘जेलमा त फोन दिइँदैन होलाजस्तो लागेको थियो, तर त्यहाँबाट पनि फोन आयो । नम्बर ब्ल्याकलिस्टमा राखिदिन्थेँ, तर नम्बर फेरी–फेरी धम्की दिन्थ्यो,’ युवतीले भनिन्, ‘अहिले छुटेपछि म झन् असुरक्षित छु । केही दिन संस्थामा बसे पनि अहिले लुकेर बाँच्नुपरेको छ । पीडकको परिवार, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष र एकजना सांसदले पनि उजुरी फिर्ता लिन भन्दै फोन गर्नुभएको छ । कति नम्बर फेर्नु ? घरपरिवारबाट पनि सहयोग छैन । माइतीतर्फका मान्छेलाई पनि धम्की दिने गरेको छ ।’
तर, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र जगदीश घिमिरेको इजलासले अभियुक्तलाई छाड्न आदेश दियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘... मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराउनुपर्ने अवस्था देखिन नआएकाले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी तहाँ अदालतबाट मिति २०७८/०८/१३ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । प्रतिवादीउपर परेको जाहेरी र प्रतिवादीले मौकामा बयान गर्दा करणी गरेको स्वीकार गरेको अवस्थासमेतलाई विचार गरी प्रतिवादी पशुपति मैनालीबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु. १ लाख नगद, धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नू ।’ आदेशमा उल्लेख भएको दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा जमानत वा बैंक जमानत लिने उल्लेख छ भने ७२ मा यो तोक्ने आधारबारे बताइएको छ ।
यो मुद्दा हाल जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । थुनछेक आदेशका क्रममा जिल्ला अदालतले मैनालीलाई थुनामा पठाएको थियो । आधारबारे जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले गरेको आदेशमा आरोपितले प्रहरीअगाडि बयान गर्दा सहमतिमै करणी गरेको स्विकारेको बताइएको छ । साथै, युवतीको शरीरमा टोकेको चिह्नहरू रहेको र घटना भएको होटेलको कोठाको मुचुल्काले पनि जबर्जस्ती करणी भएको आशंकालाई बल पुग्ने इजलासको ठहर थियो । ‘... तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी अहिले नै आरोपित कसुरमा निर्दोष रहेका छन् भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएकाले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम नै हुने हुँदा’ थुनामा पठाउने आदेश भएको थुनछेक आदेशमा उल्लेख थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आधारहरूबारे उल्लेख गरेको छ । जसको (१) (ख) मा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरमा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमध्ये एक जबर्जस्ती करणी पनि हो । तर, उच्चले मौकामा बयान गर्दा करणी गरेको भनी स्विकारेका मैनालीलाई धरौटीमा छाडेको हो । उच्चले यसैलाई नै आधार मान्दै यस्तो आदेश गरेको हो । साथै, चार वर्षदेखि जबर्जस्ती करणी गरे पनि १५ कात्तिकमा बल्ल जाहेरी परेकाले पनि मैनालीलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने आदेश गरेको हो । आरोपितको भनाइलाई आधार मानेर पाटन उच्च अदालतले आदेश गरेको छ । ‘... प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मनकामना गेस्टहाउसको २०२ नं. कोठामा सहमतिमा करणी भएको भने तापनि मिति २०७८÷७÷१५ को वारदातको सम्बन्धमा २०७८÷७÷१५ मा नै शारीरिक परीक्षण हुँदा’ पहिलेदेखि नै शारीरिक सम्बन्ध राख्ने गरेकोजस्तो देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । उक्त आदेशमा गेस्टहाउस सञ्चालकले दुवैजना आएको र तीन घन्टा बसेर गएको भनी प्रहरीसमक्ष गरेको बयानलाई पनि आधार मान्दै आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गरेको हो ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले भने अदालतबाट आदेश पठाइएपछि मात्र यस विषयमा के गर्ने भनी निर्णय लिइने जनाएको छ । कार्यालयकी प्रवक्ता मुना पौडेलले भनिन्, ‘अरू मुद्दाहरूमा पनि हाम्रो कार्यालयमा अदालतले फैसला पठाएपछि निर्णय गरिन्छ । कुन आधारलाई टेकेर अदालतबाट फैसला भएको हो त्यो हामी हेर्छौँ । हामीलाई चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जाने हो । अन्य मुद्दाझैँ यो पनि कार्यविधिगत रूपमा नै अगाडि बढ्छ ।’
यस्तो छ घटनाको सिलसिला
युवतीको विवाह नौ वर्षअघि नुवाकोटकै एक युवकसँग भयो । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर थिए । त्यसै क्रममा तादी गाउँपालिकाकै एक कर्मचारी र युवतीका नातेदार पर्ने अभियुक्त मैनालीले एक रात आफूमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको र आफूलाई थाहा नदिई त्यसको भिडियो खिचेको जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
त्यसपछि उक्त भिडियो श्रीमान्लाई पठाइदिने धम्की दिँदै पटक–पटक भेट्न बोलाउने, शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, नग्न फोटो तथा भिडियो पठाउन दबाब दिने, भिडियो कलमा पनि उस्तै किसिमका दबाब दिने गरेको युवतीको भनाइ छ । मैनालीले ती भिडियोकलका स्क्रिनसटसमेत लिएका थिए । त्यसकै आडमा धम्क्याउने गरेको पीडितले प्रहरीसामु बताएकी छिन् । यसरी चार वर्षसम्म यौनशोषणमा परेको दाबीसहित उनले प्रहरीमा उजुरी गरेकी छिन् । मैनालीको शोषणबाट दिक्क भएपछि आफूले गाउँ छाडेको, तैपनि दुःख दिन नछाडेको पीडितको भनाइ छ ।
‘निजबाट छुटकारा पाउन भनी म गाउँ नै छाडी काठमाडौंमा आई बसोवास गर्न लागेँ । निजले मलाई विभिन्न फोन नम्बरहरूबाट फोन गर्ने तथा म्यासेज गर्ने गर्दै आएका थिए,’ उनको जाहेरीमा छ । पटक–पटक आफूले ती सामग्री डिलेट गर्न भन्दा नमानेको युवतीको भनाइ छ । पछिल्लोपटक १५ कात्तिकमा भेटेर ती सबै डिलेट गर्ने भनेपछि आफू भेट्न पुगेको, तर त्यतिवेला फोटोहरू देखाई उल्टै धम्क्याएर होटेलसम्म पु¥याई जबर्जस्ती करणी गरेको युवतीको भनाइ छ । उक्त फोटोहरू आफन्त तथा नातेदारलाई पनि पठाइदिएको युवतीको आरोप छ । ‘निजले मेरो अश्लील फोटोहरू खिची अन्य मानिसहरूलाई पठाइदिएको फोटो मसँग छ,’ युवतीले जाहेरीमा भनेकी छिन् ।
अहिले युवती श्रीमान्सँग छुट्टिएकी छिन् भने घरपरिवारबाट पनि सहयोग छैन । अर्कोतिर ज्यान मार्ने धम्की आइरहँदा आफू बस्ने ठाउँ नै फेरिरहन बाध्य भएको युवती बताउँछिन् । ‘जेलमा हुँदा पनि धम्की दिने व्यक्ति बाहिर निस्किएपछि झन् डर बढेको छ । मैले कल रेकर्डहरू पनि राखेकी छु,’ युवती भन्छिन् ।